Olu hlobo lweembadada, njenge-Dotsy, luyaziwa wonke umntu. Ngenxa yobungqina beembonakalo zabo, zibizwa ngokuba yi-lunokhods okanye izibonda. Kungekudala, baye bawuthandwa ngokugqithiseleyo phakathi kwesini esilungileyo. Oku akumangalisi, kuba zikhululekile kwaye zifudumele. Ewe, le ndlela ayifanelekanga kwiintlanganiso zezoshishino okanye iziganeko eziqhelekileyo, kodwa apha ngenxa yokuzilibazisa okusebenzayo kunye nobomi bemihla ngemihla, iibhothi zamabhinqa zeDutych azikho phantsi. Ezi zibhothi zinempawu zazo, okufuneka ziqwalaselwe xa zithengwa. Bayafana neebhotshi ngaphandle, kuphela kwifomu ehlaziyiweyo. I-Dotyshs ikhanya kakhulu, ikhululekile kwaye idala nje ukuhlala kwidolophini.
I-Lokhookhods zenziwa kuphela ngezinto eziphezulu zobugcisa. Kule meko, isikhumba sangempela okanye i-suede ayifanelekanga, kodwa oku akuthethi ukuba umntu akanako ukwenza ezinye izinto ezihlobisa kuzo. Abakhiqizi abaninzi bee-dummies basebenzisa ngexesha lokuveliswa kweemveliso zabo kuphela kwezobuchwepheshe obuvumela iibhothi ukuba zihlale zifudumeze ziphinde zihlaziye amanzi. Ukuze iibhothi zasebusika zabasebusika ii-Doots zazifudume zifudumala zisebenzisa ubumnyama bendalo okanye obunobumba. Siyabulela iteknoloji yanamhlanje, zombini iindidi ezifudumele kakhulu zokutshisa ekwindla nasebusuku.
Yintoni enxiba ngayo iibhothi zaseDotsy?
Iimpawu zanamhlanje zibonisa ukuba amantombazana akhetha iidummy kwiindawo eziphathekayo eziziphathekayo kunye nebhoti elikhulu. Amanqabana akhululekile kakhulu, ngoko aya kulungelelanisa ngokufanelekileyo kwindlela yokuhamba kwansuku zonke, kwakunye neli holide yelizwe. Akwanele nje ukuba uye esitolo uze uthenge amadada. Ukuze bajonge umzobo kwaye bancedise umfanekiso wakho, kufuneka ukwazi oko kufuneka ukugqoka i-duds.
I-Lokhookhods iyalungelelanisa kwimidlalo yemidlalo, kodwa ngokuqhelekileyo ukudibanisa okunjalo kulungele imisebenzi yangaphandle. Ukuba wenza isaphetha semihla ngemihla, kufuneka ukhethe i-leggings, ibhulukhwe emincinci okanye i- jeans e-skinny . Ubusika bunokuba bunzima kakhulu, ngoko unako ukuncedisa iibhuthi zakho ngefestile enkulu yokubambana, ipaki okanye ibhatyi. Njengokuba izixhobo eziyimfuneko kubalulekile ukusebenzisa amatshini afanelekileyo kunye nengxowa enepomppon. Ingqungquthela ebomvu yombala ofanayo kunye ne-cap kunye neiglavu ziza kuba zingabonakali.
Ibhinqa lonke elinemifutshane
Iifutshane zasehlobo ze-sarafans
Iingubo ezimhlophe - kunye nokokugqoka kunye nendlela yokudala umfanekiso omoya
Ijeti ephantsi iLuhta - iingubo zaseFinland eziphathekayo zabasetyhini kunye namadoda
Lacy ngaphantsi kweengubo
Imibuzo Yabesifazane - iCotton
Ama-Pajama ngendlela yezilwanyana
Ugqoke ngefriji ephantsi
Ingubo yomnqophiso wamahhala
I-Hell of Perfectionist: Iifoto ezingama-31 eziphula ukuvisisana kweli hlabathi
Ingubo engavaliyo - iifowuni ezikhethiweyo zeefesistas ngaphandle kwee-complexes
Ungabelana njani nomthandi wakho?
Ubuhlungu emadolweni - obangela
Indlela yokubetha abamhlophe?
Uhlobo lwaseBengal lweekati - ikopi yasekhaya yengwe
Iintlobo ezinobulumko kakhulu kwizinja
Isifo seswekile sesibini 2 - isisindo seswekile egazini
Iingubo eziphambili ze-TOP-20, ezigqityiweyo ezigqityiweyo
I-Ethnographic Museum ye-Eirarbakki
Izinguqu ezinobungqina kwiimfumba ezincinci
Indlela yokupheka iilentili?
Kutheni sifuna iingubo zangaphantsi?